Fekitari - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Kambani yedu inoshandisa zvizere ISO9001 quality management system uye ISO13485 medical device quality system, uye inoshandisa kunyatsoongorora katatu mukugadzirwa: kuongorora kwezvinhu zvakasvibirira, kuongorora maitiro uye kuongorora fekitari; zviyero zvakaita sekuzviongorora, kuongorora pamwe chete, uye kuongorora kwakakosha kunogamuchirwawo panguva yekugadzira uye kutenderera kuti ive nechokwadi chemhando yechigadzirwa. Ita shuwa kuti zvigadzirwa zvisina kukodzera zvinorambidzwa kubva mufekitori. Rongedza kugadzirwa uye kuendesa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi uye zvinoenderana nemitemo yenyika, uye ive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvakapihwa zvitsva uye zvisingashandiswe zvigadzirwa, uye zvinogadzirwa neyakagadzirwa zvigadzirwa uye tekinoroji yepamusoro kuve nechokwadi chemhando yechigadzirwa, yakatarwa uye kuita. Zvinhu zvacho zvinotakurwa nenzira yakakodzera.
Quality policy, Quality zvinangwa, Kuzvipira
Mutengi kutanga; mhando yekutanga, yakasimba kudzora maitiro kudzora, kugadzira yekutanga-kirasi mhando.
Zvinangwa zvemhando yepamusoro
Mutengi kugutsikana kunosvika 100%; chiyero chekuendesa panguva chinosvika 100%; maonero evatengi anogadziriswa uye mhinduro 100%.
Kuti inyatso kudzora zvinhu zvinokanganisa tekinoroji yechigadzirwa, manejimendi uye vashandi, uye kudzivirira nekubvisa zvigadzirwa zvisingaite, kambani yakaronga uye yakarongeka yakagadzira magwaro emhando yemhando uye akaashandisa kuti ave nechokwadi chemhando yepamusoro. Iyo system inoramba ichishanda.
Ronga uye ita dhizaini yekugadzira uye kusimudzira zvinoenderana nedhizaini yekudzora chirongwa kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa chinosangana neakakodzera nyika zviyero uye zvinodiwa nemushandisi.
Kudzora magwaro uye zvinhu
Kuti uchengetedze kutendeseka, kururamisa, kufanana uye kushanda kwezvose zvinyorwa zvine chokuita nehutano uye zvinhu zvekambani, uye kudzivirira kushandiswa kwemagwaro asina kukodzera, kambani inonyatso chengetedza zvinyorwa uye zvinhu.
Kuti isangane nezvinodiwa zvemhando yezvigadzirwa zvekupedzisira zvekambani, kambani inonyatso kudzora kutengwa kwezvinhu mbishi uye zvekubatsira uye zvikamu zvekunze. Nyatsodzora supplier qualification verification uye procurement maitiro.
Kuti udzivise zvinhu zvakasvibirira uye zvekubatsira, zvikamu zvakatengwa, zvigadzirwa zvakapedzwa uye zvigadzirwa zvakapedzwa kubva mukusanganiswa mukugadzira uye kutenderera, kambani yakatara nzira yekuzivikanwa kwechigadzirwa. Kana zvinodikanwa zvekuteedzera zvatsanangurwa, chigadzirwa chimwe nechimwe kana batch yezvigadzirwa zvinofanirwa kuzivikanwa zvakasiyana.
Iyo kambani inonyatso kudzora maitiro ega ega anokanganisa kunaka kwechigadzirwa mukuita kuti ive nechokwadi chekuti chigadzirwa chekupedzisira chinosangana nezvinodiwa.
Kuti uone kana chinhu chimwe nechimwe chiri mukugadzira chinosangana nezvinodiwa, kuongorora uye kuyedza zvinodiwa zvinotsanangurwa, uye marekodhi anofanirwa kuchengetwa.
Kudzora kwekuongorora uye kuyerwa kwemidziyo
Kuti ive nechokwadi chechokwadi chekuongorora uye kuyerwa uye kuvimbika kwekukosha, uye kusangana nezvinodiwa zvekugadzira, kambani inotara kuti michina yekuongorora uye yekuyera inofanirwa kudzorwa nekuongororwa. Uye kugadzirisa maererano nemitemo.
Kuziva kwemhando yepamusoro kunobatanidzwa mune ese maficha eHMKN
Chikwata chekambani chine ruzivo chekudzora mhando chinotevera iwo epamusoro indasitiri yekuongorora zviyero zveIQC, IPQC uye OQC kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro yezvigadzirwa.
Kudzora kwezvigadzirwa zvepasi pasi
Kuti udzivise kusunungurwa, kushandiswa uye kuendeswa kwezvigadzirwa zvepasi pasi, kambani ine mitemo yakasimba pamusoro pehutungamiri, kuparadzaniswa uye kurapwa kwezvigadzirwa zvisingasviki.
Kugadzirisa uye kudzivirira matanho
Kuti ibvise zvinhu chaizvo kana zvingangove zvisina kukodzera, kambani inonyatso tsanangura matanho ekugadzirisa uye ekudzivirira.
Kutakura, kuchengetedza, kurongedza, kuchengetedza uye kutumira
Kuti ive nechokwadi chemhando yekutenga kwekunze uye zvigadzirwa zvakapedzwa, kambani yakagadzira magwaro akasimba uye akarongeka ekugadzirisa, kuchengetedza, kurongedza, kudzivirira uye kuendesa, uye nekunyatsoadzora.